सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा अब के हुन्छ ? यस्तो छ कानूनी प्रावधान - Media Dabali
सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा अब के हुन्छ ? यस्तो छ कानूनी प्रावधान
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार घोषणा गरिएको संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारीस्तरबाट विशेष निगरानी हुनेछ । हालै सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीपहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुवै जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ऐनमा थप प्रावधान के–के छन् ?
पढ्नुहोस् थप विवरण –